Posted by Tranquillus | Sep 20, 2021 | Shabakada
Suxufi shan sano ah isaga oo ka wakiil ah warbaahinta tixraaca, Jean-Baptiste waxa uu u ekaan lahaa, mudnaan, oo aan u dhigmin astaanta caadiga ah ee bartaha Maareeyaha Mawduuca. "Si aad ah u tababaran", horeyba u qalin jabiyay, ku xeel dheer farsamada qorista iyo sidoo kale shuruudaha webka, qani ku ah khibrad dheer ... Tababarkiisa Ifocop ayaa si kastaba ha ahaatee u calaamadeeyay dardargelinta xirfaddiisa. Wuxuu sheegayaa sida.
Jean-Baptiste, waxaan ku akhriyay CV-gaaga inaad hore BA ugu haysatay saxaafadda. Maxay tahay, haddaba, is -diiwaangelinta koorsada tababarka Maareeyaha Maaddada?
Dantu aad bay iigu fududahay inaan fahmo: kuwani waa laba shaqo oo asaas ahaan kala duwan, oo leh hawlgallo muuqda - soo saar nuxur - laakiin xaqiiqooyinka, gaar ahaan kuwa dhaqaalaha, oo iyaguna kala duwan. Dabcan, waxaa jira qoraal wadaag iyo rabitaanka in la wargeliyo, sida adeegsiga aaladaha la midka ah ama isku midka ah sida mareegaha, warsidaha, baloogga… Laakiin isbarbar dhiggu ma dhaafi karo.
Sababtoo ah saldhiggan guud, weli waxaan kuugu hadli karnaa "takhasus" halkii aad ka ahaan lahayd dib -u -tababar, sax?
Haa, waxay ku jirtaa xaaladdan maskaxeed inaan u soo dhowaaday tababarkeyga oo ah Maareeyaha Macluumaadka. Ujeeddadu waxay ahayd in la helo xirfado dheeri ah, si loo horumariyo fikradaha suuqgeynta dhijitaalka ah, koodh,
Laga soo bilaabo saxafi ilaa maareeyaha Mawduuca: Kala-guurka xirfadeed ee Jean-Baptiste. Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ 07| Maxaa dhacaya dhamaadka koorsada tababarka?
horeErayada SOS: sida loo bilaabo wada hadalka luuqadaha oo dhan?
socdaCybermoi/s 2021: ku ilaali naftaada ereyada sirta ah ee sugan